eNasha.com - शिशिरको साङ्गीतिक वसन्त
नाम उनको शिशिर तर उनको स्वर सुन्नु भयो भने जस्तोसुकै शिशिर याममा पनि वसन्त ल्याउन सक्ने खुबी ! आइतबार उनै शिशिरको वसन्त ल्याउने खुबीका बारेमा चर्चा गरियो । प्रसङ्ग थियो, गायक शिशिर बाङ्देलको पहिलो एल्बम 'सम्झिरहन्छु' ।
नाम चाहिँ उनले सही राखेका रहेछन् । उनीसँगै गायन सिकेका कतिपय 'कलिग'हरु नामी गायक बनिसके । उनले पनि एल्बम निकाल्न नखोजेका होइनन् तर 'सही समय' कुरिरहेका थिए । तर कुन बेला सही समय कुर्दाकुर्दै ढिला भइसकेछ उनैलाई पत्तो भएन ।
तर तराईमूलमा एउटा उखान छ नि- देर से आयब, दुरुस्त आयब । त्यस्तै लाग्छ, शिशिर बाङ्देलका स्वरलहरी सुन्दै जाँदा । सान्तना रेकर्ड्सले बजारमा ल्याएको उनको गीति एल्बम सम्झिरहन्छुमा नौ गीत रहेका छन् । जसका अधिकांश गीत, सङ्गीत गायक स्वयंकै छन् । उनीबाहेक एल्बममा राकेश खालिङ, राजकुमार थापा, विवेक निरौला, जे. पापी तथा विप्लव प्रतीकका गीतलाई राकेश खालिङ, भगत राई र सुवर्ण लिम्बुले सङ्गीत दिएका छन् ।
एल्बमको अनुहार हेर्दा तपाइँलाई यो पप वा हिपहप एल्बम लाग्न सक्छ तर धोकामा नपर्नुस्, यो विशुद्ध आधुनिक गीति सौगात हो । उनले आइतबार आफूलाई सङ्गीत सिकाउने गुरु प्रभु ढकाल र गीतकार विप्लव ढकाललाई प्रमुख अतिथि बनाई यो एल्बमको विमोचन गराएका थिए ।
कार्यक्रममा उनले आफ्नो एल्बमको म्युजिक भिडियोसमेत प्रदर्शन गरेका थिए ।
बजारमा रिलिज गायक सङ्गीतकार लुकेका कुरा उपलब्धि कीर्तिमान समुद्रपार क्या बात ! तातोपीरो ट्रयाक बाहिर अवार्ड नेपाली तारा भिडन्त गायिका प्रेम र विवाह विचार पेज थ्री रुचि गीतकार